6 kamida dalalka Bariga Afrika oo halis ugu jira raashin yari - Sabahionline.com
6 kamida dalalka Bariga Afrika oo halis ugu jira raashin yari Luulyo 30, 2012
Lix dal oo ku yaala Bariga Afrika ayaa halis ugu jira raashin yari baahsan, iyadoo 16 milyan oo qofna ay la kulmi doonaan jahawareerka ugu xun ee xagga raashinka ah, sida lagu sheegay warbixin ay soo saartay Famine Early Warning Systems Network (FEWSN).
UNHCR: Caqabadihii weli way hor taagan yihiin qaxootiga Soomaaliyeed
Digniinta FEWSN ayaa waxaa ku jira dalalka Kenya, Jabuuti, Itoobiya, Suudaan, Koonfurta Suudaan iyo Ugandha, waxaana sababai doona roob yari, colaad, kor u kac sicirka raashinka ah iyo mararka qaar oo la awoodo waayi doono in la helo gargaarka aadaninimada ah. FEWSN, oo ay maal galiso hay'adda Mareykanka ah ee Horu-marinta Caalamiga ah (USAID), ayaa waxa ay la mataan tahay hay'ado gobolka iyo caalamiba ah, si ay usoo gudbiso digniin goor hore ah oo la xiriirta arimaha sugnaanta cuntada.
Roobabkii Koonfur Bari Kenya laga filayay intii u dhaxaysay bilihii Maarso iyo May ayaa aad u yaraa sanadkan, iyadoo aagagga koonfureed ee gobolka ay la kulmi karaan dhibaatooyin raashin yari ah, ayaa warbixinta lagu sheegay. Caawinta raashinka aadaninimo ayaa sicirka ka dhigay mid daggan, iyadoo xaaladaha ay macluul gaareen sanadkii 2011-ki. Inkastoo hor'umar la sameeyay, haddana in ka badan 15 boqolkiiba bulshada waxaa ay wajahayaan raashin yari meelo kamid ah dalka. Aaggagga ku tiirsan dalagga ee Koonfurta Soomaaliya, sida Baay, qeybo kamida Jubba, Shabelle, Bakol iyo Gedo ayaa helay roob yar oo soo daahay intii lagu jiray xili roobaadkii sanadkan ee bilihii u dhexeeyay April iyo June, hay'adda ayaa warisay. Dad fuqarada ah iyo kuwa ka sii daran ee guryaha ku leh koonfurta Soomaaliya ayaa la rajaynayaa in ay ku sii sugnaadaan dhibaatooyin iyo xaalado deg deg ah oo la xiriira sugnaanta raashinka. Muxuu kula yahay qoraalkan?